Tag: goobta google | Martech Zone
Tag: goob google
Waxaan ku qabannay codbixin Zoomerang dhinacayaga usbuucyadii la soo dhaafay si aan u helno sawir cad oo ku saabsan inta shirkadood ee qaatay bogga Google+. Natiijooyinka codbixinta waxay ahaayeen kala qeybsanaan fiican… kaliya 50% aqristayaasha ayaa sheegay in shirkadooda ay leedahay bog Google+. In kasta oo ay taasi u muuqan karto mid hoose, haddana waxaan u maleynayaa in tirooyinka dhabta ah ay aad uga hooseyn karaan. Waxaan yara yara rajo xumaa in dad badani haysteen. Sidii aan u raadinnay macaamiisheenna '
Isniin, November 14, 2011 Isniin, Oktoobar 26, 2020 Kevin Mullett
Kani ma noqon doono qoraal kale oo kugu dhiirrigelinaya inaad si deg deg ah u sameysato Google Plus Page-kaaga ganacsi, mana ku siin doono tilmaamo sida loo sameeyo. Xaqiiq ahaan, taasi waa waxa aan rajaynayay inaan ku soo jeediyo sii deynta Google+, in kasta oo aan u diyaar garoobay webinar illaa dhammaadkaas, waa inaan si dhab ah u bixiyaa alternative hadda. Maxaa diidaya kaliya in la quusto? Hagaag, intaan u ogolaaneyno